Daacish Archives - Page 4 of 4 - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Daacish'
April 26, 2016 – Ururka xagjirka ah ee ka dagaalama Dalalka Ciraaq iyo Suuriya ee Daacish ayaa wuxuu maanta shaaca ka qaaday in ciidamo iyaga taabacsan ay maanta weerarkii ugu horeeyay ay ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya. Qoraal uu Ururka Daacish ku baahiyay barta uu ku leeyahay Twitter-ka, ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan oo loo …
Wiilal Soomaali ah oo ka Baxay Dalka Ingariiska ah oo lagu Dilay Dalka Suuriya (SAWIRRO)
April 05, 2016 – Wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee lagu magacaabo Daily Mail ayaa qoray in labo muwaadin oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya oo ka tirsanaa kooxda Daacish ay ku geeriyooday dagaal ka dhacay gudaha dalka Suuriya. Wargayska oo soo xiganayay ehelada muwaadiniintaan ayaa qoray in labada muwaadin lagu dilay dagaal ka dhacay …
Ururka Daacish oo Farxad Awgeed Nac Nac Iyo Shukulaato Qaybiyay, Qaraxii Brussel Kadib (SAWIRRO)
March 24, 2016 – Ururka Daacish oo Sheegtay inay iyagu ka danbeeyeen weerarkii lagu qaaday magaalada Brussel ee dalka Belgium-ka ayaa la sheegay inay farxad awgeed nac nacyo ka qaybiyeen goobaha ay gacanta ku hayaan ee dalka Suuriya. Ciidamo ka tirsan Ururkaasi ayaa la arkayay iyagoo Nac nacyo u qaybinaya dad isugu jiray dhalinyaro iyo waayeel, …
DAAWO: Waxa Qabsaday Askarigan Ciraaqeys-ka ah iyo Caqligiisa (VIDEO)
March 21, 2016 – Askari Ciraaqiyaan ah oo dagaal kula jiray kooxda ISIS/ Daacish ayaa waxaa la galiyay go’doon, isagoona ka gudbi waayay goob uu liif saarnaa ama laga soo Shiishayay. Askarigan ayaa waxa uu fakaray habkii uu goobtaasi uga baxsan lahaa, waxaana uu billabay inuu tijaabiyo noocyo babad oo uu goobtaasi uga fakan la haa …
Wiilka ay Daacish u Adeegsato Dhanka Xayeesiinta oo Rag Gaari Ku Qarxiyay (VIDEO)
February 11, 2016 – Ururka Daacish ayaa soo bandhigay muuqaal naxdin badan uu ku jiro wiilkii yaraa ee lamagac baxay Jihaadi juniyor wiilkan yar oo da’diisa lagu qiyaaso 5-6jir oo gaari ku qarxinayorag lagu eedeeyay inay basaasiin u ahaayeen dowladaha reer galbeedka. Wiilkan oo Daacish u bixisay “Jihadi Junior” ayaa hooyadiis waxa ay ku biirtey ururka …
Ciidamada Dalka Spain oo Soo Qabtay Rag La la Xiriirinayo Ururka Daacish (VIDEO)
February 08, 2016 – Ciidamada Sida gaarka ah u tababaran ee dalka Spain ayaa soo qab-qabtay todoba ruux oo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin Ururka Daacish iyo ururo kale oo ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Sida uu sheegeen Afhayeenka booliskaasi, ragani ayaa lagu soo qabtay howlgalo ay ciidamada amaanka ka fuliyeen magaalooyinka Valencia …
DAAWO: Ragii Weerarka Ku Qaaday Hoteel Ku yaal Dalka Masar oo la Dilay (VIDEO)
January 09, 2016 – Kooxo la sheegay inay xiriir la leeyihiin ururka daacish ayaa waxa ay weerar ku qaadeen Hoteel dalxiisayaasha daganyihiin ee ku yaala magaalada Hurghada ee dhacda bariga dalka Masar. Ragii weerarka ku soo qaaday Hoteelka ayaa la sheegay inay ahaayeen 3 nin oo ku labisan dharka ururka daacish lagu yaqaan, iyagoona sitay …
Wiilkii video-ga Daacish kasoo dhex muuqday oo Awoowgiis la waraystay (VIDEO)
January 06, 2016 – Wiilkii yaraa ee ku jiray muuqaalkii Dacish ugu hanjabaysay dalka Britain,waxaana magaciisa lagu sheegay inuu yahay Isa Dare,oo ay dhashay haweenay xagjir ah oo lagu magacaabo Grace Khadija Dare. Haweeneydan ayaa ka dhooftay dalka Ingariiska, si ay ugu biirto Ururka ISIS/Dacish, waxayna ka mid ahayd gabdhihihii u horreeyay ee reer Galbeedka …